Ubugcisa babantwana: Ukuncamisa okuphaphayo | Imisebenzi yezandla
Imisebenzi yezandla yabantwana: Ukuncamisa okuphaphazelayo
Dunya Santiago | | Imisebenzi yezandla, Imisebenzi yezandla zabantwana
Kukho imisebenzi engapheliyo esinokuyenza ngezandla zethu kunye nezinto ezithile ezisisiseko kwaye sinokubonwabisa abantwana bethu ukuba ... zobugcisa! Ndiyathemba ukuba uyaphuza kuba namhlanje siza kwenza ukubhuza okubhabha Masibone ukuba ucinga ntoni!
Ukuze ingahambi iikona kwaye iyisebenzise, ​​siya kuyiguqula ibe yimagnethi ehlekisayo yokuyibeka kwifriji yethu. Ke siyakuhlala siphuzana ngumntwana wethu. Ewe, masiqale emsebenzini:
Yinto elula njengokwenza isangqa kulo naliphi na iphepha, ungayisebenzisa ngombala ukuyenza ibe nomtsalane ngakumbi kwaye ibe mnandi. Sipeyinta imilebe yabancinci ngemilebe ethile enombala (umzekelo obomvu) ukuze baphuze okumbindi embindini wesangqa kwaye bashiye uphawu, oluya kuthi lubonise “ukwanga okubhabha”.
Emva koko siza kuzobeka kwaye sinqumle amaphiko, kuba ngaphandle kwezi, ngekhe kubhabhe! Sithatha ikotoni siyincamathisele emaphikweni ngeglu, siza kuyityumza siyisasaze ukuze ingabilisi kakhulu kuba siza kuyipenda kamva. Xa sele sinamaphiko kunye nesangqa silungile, siya kuyidibanisa ibe yinto enye.
Ungazinceda ngeglu encinci ukuze ubambe ngcono amaphiko kumacala omabini esangqa, nangona ngokwenyani kunganyanzelekanga ukuba siyayicola ngokuchanekileyo. Kule nto siza kusebenzisa ulwelwesi oluqhelekileyo nolwesiqhelo ukucola iincwadi zesikolo, sinokukufumana ngokulula kuyo nayiphi na ikhulu zonke. Siqala ukuyipenda kwelinye icala, silumke singashiyi amaqamza omoya. Kwaye emva koko siyiguqula ngaphezulu kwaye siyilaminishe kwelinye icala ngasemva, ukuze ulungelelwaniso lwangaphambili lunamathele ngasemva emaphethelweni.
Okokugqibela sinciphisile sishiya umda omncinci ukuze i-linings inamathele kakuhle kwaye ukwanga kwethu okubhabha kuhlala ngcono kwaye kungaphumi. Kwaye ekugqibeleni, kwicala elingasemva sancamathisela iqhekeza lomazibuthe kwaye sele sinemagnethi yethu yefriji ngokumanga konyana / kwentombi yethu!
Iinkcukacha ezithe xaxe - Imisebenzi yezandla yabantwana: Isigqumathelo sehagu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla zabantwana » Imisebenzi yezandla yabantwana: Ukuncamisa okuphaphazelayo
Izinto zokudlala ezihlaziyiweyo: UMlingo woMlingo!
Imisebenzi yezandla yabantwana: Isigqumathelo sehagu